Rahasimanana Paulbert (Rossy) : Mivonona hamerina ny fanakorontanana -
AccueilSongandinaRahasimanana Paulbert (Rossy) : Mivonona hamerina ny fanakorontanana
Rahasimanana Paulbert (Rossy) : Mivonona hamerina ny fanakorontanana
Ankoatra ny fisintonana lakolosy ao amin’ ny sendikan’ ny artista, izay efa lasa resaka politika rano iray ary nanaovan’ i Rossy na ny depiote Rahasimanana Paulbert valan-dresaka ho an’ ireo mpanao gazety vitsivitsy omaly, dia efa tsy nahagaga intsony ny tetika fanakorontanana tadiavina hovolena. Raha ny hita omaly tokoa mantsy dia nampiasaina amin’ ny resaka politika ny sendikan’ ny artista, izay tsy mahafantatra fa tombontsoam-politika no naseho omaly dia nanara-drenirano fotsiny ary nahatsiaro tena ho voafitaka. Mazava rahateo izany fa efa nivonona amin’ ny fomba rehetra ity solombavambahoaka sady artista ity, izay hiarahan’ ny rehetra mahalala ihany koa ny lasany tamin’ny Amiraly Didier Ratsiraka. Izay nananganany ny bemoranga, fikambanan-jiolahy sy andiana tanora mpigafy sy mpanakorontana eraka ny tanàna. Tamin’ izany fotoana aza ireo bemoranga ireo dia mahavita mihitsy manenjika olona sy mandratra, reo efa tonga ny baiko avy amin’ny lehiben’ izy ireo izay tsy iza fa i Rossy manokana. Raha ny tantara ihany no jerena sy hitodiana, indrindra tamin’ ny fipoahan’ ny krizy 2002, izay nandraisan-dRavalomanana fitondrana. Voatery nitsoaka niala teto Madagasikara i Rossy noho ny fanenjehana azy, satria dia tsy voabaikony intsony ireo bemoranga ireo, ary tsy afaka niaro intsony ihany koa. Ireto farany moa izay tavela irery teto Madagasikara, ary nisy ny voasambotra, satria i Rossy tamin’ izany dia nitsoaka any ivelany.
Manoloana ny hetsika izay tanterahin’ny solombavambahoaka anio ho eny Analakely kosa indray, dia tazana tamin’ny tambazotran-tserasera ny famerenan’ity olomboafidy sady mpanakanto kalaza amin’ ny fanangonana olona amin’ny fanakorontanana io fihetsika io. Raha ny tazana amin’ ny horonan-tsary izay nahodina tetsy amin’ ny kianjan’ ny kanto mantsy, dia eo ny fahitana ny solombavambahoaka manentana olona ho avy etsy Analakely. Mahagaga anefa fa efa fantatr’ity solombavambahoaka ity fa tsy nahazoana alalana io hetsika rahampitso io, nefa dia mbola sahiny ihany ny miantso vahoaka. Noho izany dia efa nisy izany ny fandikan-dalàna. Manaraka izany dia efa tazana indray ny bemoranga taorian’ity solombavambahoaka ity, izay efa mampiseho sahady fa hitarika olona hanakorontana amin’ ny hetsika rahampitso. Noho izany voaporofo amin’ny alalan’ ity horonantsary ity fa tsy hadio velively ny lalao rahampitso, samy mailo noho izany ireo izay mieritreritra fa tena tatitra tokoa no hotanterahin’ireo solombavambahoaka. Satria dia efa mampiseho sahady izy ireo fa hitondra ny bemoranga ho eny an-toerana. Tsy madio fo noho izany ireo solombavambahoaka lany teto Antananarivo, satria dia mazava sy voaporofo izao fa tsy tatitra no ataon’izy ireo fa hitondra “gros bras” miampy bemoranga hanakorontana.